Ilmaha shaybaar miyaa laga qaada?
Ilmaha aan weli lex sano buuxsan oo la dhiban calaamadaha cudurka oo fudud, badi ahaan lagama qaado shaybaar. Calaamadaha cudurka waxay noqon karaan tusaale qufac, hargab, dhuun-xannuun, yaaqyaaqsi ama dareenka dhadhanka iyo urta oo hoos u dhaca. Haddii calaamadaha cudurka ee Ilmahaaga ay halis yihiin ama sabab kale ay jirto, waxaa la idinku talinayaa in shaybaar laga qaado. Shaybaar ka qaadista awgeed la xiriir rugta daryeel-caafimaadeedka.
Ilmaha da ' dooda u dhacxayso 6 ilaa 12 sano, waxay isticmaali karaan sanduuq u ku jiro waxyaalaha qofku u iskiisa shaybaar isaga qaadi karo ama rugta daryeel-caafimaadeedka ayaa shaybaar ka qaadista ka caawini karto.
Dhallinyarada iyaga ayaa shaybaar iska qaadi karo.
Gobolka Västerbotten isaga qaad shaybaarka
Shaybaarka laf ahaantaada iska qaadi karo ama shaybaar iska qaadista waxaa ka caawini karo rugta daryeel-caafimaadeedka.
Sidii aad shaybaarka laf ahaantaada ayaa iska qaadi karo, waa inaad haysato Tobbanka lambar aqoonsiga dalka Iswiidan ama lambarka loo yaqaanno [reservnummer] kaasoo maamulka Gobolka Västerbotten ku siiyay. Haddii aadan haysann waxaa ka caawin karo shaybaar rugta daryeel-caafimaadeedka ee aad ka tirsan tahay.
Haddii aad la dhiban tahay calaamadaha cudurka halis ah, laf ahaantaada ha iska qaadin shaybaarka. Xaaladdaas waa inaad la xiriirta rugta daryeel-caafimaadeedka aad ka tirsan tahay, talo-siin iyo shaybaar ka qaadista. Xitaa haddii aadan doonayn ama shaybaarka laf ahaantaada ayaa iska qaadi karo waa inaad la xiriirto rugta daryeel-caafimaadeedka aad ka tirsan tahay qiimayn awgeed iyo shaybaar ka qaadista.
Ka baadigoobo faahfaahinta xiriirka rugta daryeel-caafimaadeedka iwm ee aad ka tirsan tahay (warbixinta af-iswiidish ayay ku qoran tahay).
Goobaha aad ka soo qaadan karto baakada ku jirta waxyaalaha shaybaarka laysaga qaado
Goobaha aad ka soo qaadan karto baakada ku jirta waxyaalaha shaybaarka laysaga qaado waxay ku yaalaan qobolka oo idil. Qof aan lahayn calaamadaha cudurka ayaa ku soo qaadi karo, kaddib dib ugu celin kartaa, tusaale qof qoyska ka tirsan ama saaxiib ah.
Suurtagal ma noqon karto inaad kahor ballansato shaybaarka.
Halkaan ayaa baakada shaybaar iska qaadista ka soo qaadan kartaa oona dib ugu soo celin kartaa:
Isniin-jimce, saacadaha 13-14, rugta daryeel-caafimaadeedka Stenbergska.
Isniin-jimce, saacadaha 13-13.30 agagaarka dhinaca gaaban ee ka soo horjeedka iskuulka Djupavaskolan - Medicinkonsulten.
Shaybaar ka qaadista Ilmaha da'dooda u dhaxayso 6 ilaa 12 sano:
Waxaad ilmahaaga u soo qaadi kartaa baakada ku jirta waxyaalaha shaybaarka laysaga.
Shaqaalaha goobaha caafimaadka waxay ka caawini karaan, sidii ilmahaaga aad shaybaar ugu qaadi lahayd, waa haddii loo baahdo. Rugta daryeel-caafimaadeedka Stenbergska waxaad caawinaad ka heli kartaa saacadaha 13.30-4 iyo Medicinkonsulten saacadaha 13-13.30.
Ka soo qaadashada baakada shaybaar iska qaadista:
Isniin-jimce, saacadaha 8-12 iyo 13-16.
Dib u soo celinta baakada shaybaar iska qaadista:
Isniin-jimce, saacadaha 8-16.
Goobta : Skellefteå lasarett, daarta 110, dusha goobta barkinka, u dhaxayso rugta daryeel-caafimaadeedka degdegga iyo rugta daryeel-caafimaadeedka maanka.
Shaybaar ka qaadista Ilmaha da’dooda u dhaxayso 6 ilaa 12 sano:
Waxaad ilmahaaga u soo qaadi kartaa baakada ku jirta waxyaalaha shaybaarka laysaga qaado.
Ogeysiis, suurtagal ma noqon karto in shaqaalaha xarumaha daryeel-caafimaadeedka ay ka caawinaan shaybaar ka qaadista ilmahaaga. Haddii laf ahaantaada aad ugu qaadi karin, la xiriir rugta daryeel-caafimaadeedka ee aad ka tirsan tahay kaddib shaybaar ka qaadista darteed ballan qabso.
Goobta : Gösta Skoglunds väg 8, baraakada ku ag taallo baarkinka. Haddii aad gaari ku timaado, ku wad gaariga wadada baarkinga wayn agagaarka wadada Köksvägen.
Shaybaar ka qaadista Ilmaha da’dooda u dhaxayso sex till 12 år:
Ilmahaaga waxaad u soo qaadi kartaa baakada ku jirta waxyaalaha shaybaarka laysaga qaado.
Baakada ku jirta waxyaalaha shaybaarka laysaga qaado, waxaa laga soo qaadan karaa xarumaha daryeel-caafimaadeedka badidooda ee ku yaalaan agagaarka Umeås iyo xarumaha daryeel-caafimaadeedka ku yaalaan degmooyinka yaryar ee gobolka.
Warbixin darteed booqo barta internetka ee rugta daryeel-caafimaadeedka aad adiga iyo ilmahaaga ka tirsan tihiin. Warbixinta baraha internetka ee xarumaha daryeel-caafimaadeedka waa af-iswiidish.
Caddaynta socdaalka ee shaybaar ka qaadista
Caddaynta socdaalka ee shaybaar ka qaadista mudnaanta koowaad lagama siiyo xarumaha daryeel-caafimaadeedka iwm ee ku yaalaan Gobolka Västerbotten. Haddii socdaal iyo caadayn dartiisa aad u baahan tahay in laga qaado shaybaar waxaad la xiriir kartaa goobaha kale ee caddaymahaas laga helo. Warbixin ku saabsan ka baadigoobo baraha interneka.
Haddii shaybaar aad laf ahaantaada iska qaaday, waxaa lagu siin doonaa tilmaan-bixinta sida loo isticmaalo waxyaalaha shaybaarka laysaga qaado oo ku jiro baakada shaybaar. Tilmaan-bixinta luqado kala duwan ayay ku qoran yihiin.
Siyaabaha kale ee lagu guda-galo madasha shaybaar-shaqsiyeedka ee loogu talagalay dadka aan haysan aqoonsiyada loo yaqaan no (BankID/mobilt BankID)
Jawaabta natiijada shaybaarka
Qiyaastii laba maamlmood gudahooda ayaa jawaabta natiijada heli kartaa.
Haddii shaybaarka aad laf ahaantaada iska qaaday, waxaad jawaabta aqrisan kartaa haddii aad guda-gasho barta internetka Direkttest.se. Waxaad ku guda-geli kartaa BankID ama koodka lagu siiyay markii aad shaybaarka diiwangelisay.
Haddii shaybaarka aad dib ugu soo celisay rugta daryeel-caafimaadeedka, waxaa jawaabta lagugu wargelin doono khadka taleefanka ama warqad. Jawaabta natiijada laguma siinaayo haddii khadka taleefanka aad kula xiriirto 1177.